Kooxda Real Madrid Oo Xaley Garaacdey Bayer Munichen Iyo Markii Saddexaad Oo Xidhiidh Ah u Soo Baxday Finalka Champions League [+MUUQAAL]
Wednesday May 02, 2018 - 15:14:00 in Wararka by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)-Real Madrid ayaa u gudubta finalka tartanka Champions League markii sadexaad oo xidhiidh ah maadaama ay Bayern Munich barbaro kula galeen garoonkooda Santiago Bernabeu.
Los Blancos waxey faa’iido ku heshay guushii ay kusoo gaareen Allianz Arena markaas oo ay 1-2 kusoo awood sheegteen, balse kulankii xalay wuxuu ahaa mid u dhib badan walow ay 2-2 la galeen dhigooda Bayern.
Goolhayaha Real Madrid Keylor Navas ayaa noqday xiddiga garoonka, kaasoo dhawr jeer badbaadiyay kooxdiisa.
Bayern Munich ayaa bilowgii ciyaarka daqiiqadii 3aad la timid gool, kaasoo uu u saxiixay Kimmich oo si la mid ah goolkii furitaanka dhaliyay is aragii koowaad ee looga soo badiyay gurigooda.
Hase ahaatee Real Madrid oo aan ku qaadan dhib badan inay iska soo gudo goolka looga hormariyay waxaa daqiiqadoo 8aad madax uga dhaliyay ciyaaryahan Benzema, kaasoo ahaa kubad uu soo karoosay Marcelo.
Ciyaarta ayaa qeybtii hore ku dhamaatay 1-1, hase ahaatee qeybtii labaad Real Madrid ayaa gool labaad dhalisay, kaasoo ahaa qalad uu galay Goolhayaha Bayern Munich Ulreich uu laba labeeyay kubad uu u soo dhigay ciyaaryahanka qadka dhexe ee Tolliso, waxaana kubadaas oo si dhib yar ku dhaaftay ka faa’ideystay Ciyaaryahan Benzema oo sidaas ku dhaliyay goolkii labaad.
Real Madrid oo hoggaanka ku qabatay 2-1 ayaa wixii xilligaas ka dambeeyay lagala wareegay maamulka ciyaarta, iyadoo Bayern isku dayaysay inay sameyso is bedel, waxaana ay la timid goolka bar baraha, kaasoo uu ka dhaliyay ciyaaryahan James Rodriguez.
Bayern Munich ayaa iska khasaarisya fursado dhowr ah oo goolal loo fishay, waxaana ciyaarta ku soo dhamaatay 2-2, Real Madrid ayaa waxaa saaciday kulankii is aragga hore oo garoonka Bayern Munich ay ku soo badisay 2-1.
Kulanka labaad ee Sema Finalka ayaa waxaa caawa uu dhex marayaa Kooxaha Roma iyo Liverpool, iyadoo Roma laga rabo in wacdaro la mid ah kii ay ku dhigtay Barcelona ay garoonkeeda illaa 3-0 uga badisay, waana arrin shaqo badan uga baahan Rome.
Liverpool ayaa is aragii hore 5-2 gurigeeda Anfeild uga soo badisay Roma, waxaana rajada yar ee Rome heysato ay tahay labada gool ee guriga Liverpool ku soo dhalisay.